I-Trestrail Cottage, eSevenhill Clare Valley
Indlu yangasese, eyezibini nje, iTrestrail Cottage yindawo yabucala kunye neyodwa yeB & B emiswe kwiihektare ezili-100 zomhlaba onamaxolo endalo aneentambo kwi-Clare Valley. Ibekwe kwikhaya laseMid North ukuya kwezona ngcango zintle zaseMzantsi Afrika kunye nabavelisi bexabiso eliphezulu. Uya kukuthanda ukurhoxa kwethu kuba yindawo yokukhulula kwiindlela zemihla ngemihla, iimfuno kunye namaqhina. Ukuziqhelanisa kwakhona kunye kunye nolonwabo lobomi obungasebenziyo, ukufumana iintyatyambo zasendle, izilwanyana zasendle, iimbono kunye namadama.
Indlu inamagumbi ama-3 - igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, ikhitshi / indawo yokutyela / indawo yokuphumla. Yindawo esondeleleneyo, elungele izibini ezonwabele ixesha kunye. Ngexesha laseBusika uya kuba nokufikelela kwigumbi lethu lesauna elishushu elimangalisayo elishushu kunye neshawari yemvula yasehlathini-yeyona nto ikhethekileyo ukuva. Umlilo wenkuni opholileyo utshisa yonke i-cottage. Ngexesha laseHlobo, unokuthanda ukulala ukhululekile phantsi kweenkwenkwezi kwindawo yangaphandle ye-bug yokuva umoya ofudumeleyo wobusuku njengoko uphumla. Iimbono eziphezu kweentlambo kunye neecontours ziyamangalisa ukusuka kumbono we-treetop kwi-cottage kunye neendawo eziphakamileyo ezingqongileyo. Luxolo olugqibeleleyo.
Oku kuyinyaniso amava Aussie ehlathini. Iimbono ezintle zeentlambo, i-Stringy bark woodlands, iintaka kunye nee-roos ezityelela rhoqo. Nangona kunjalo, awukho kude kwiivenkile zewayini ezifana ne-Skillogallee, iMitchell's, kunye neJeanerette's, iikhilomitha ezisibhozo ukusuka kwilokishi yaseClare, kunye ne-5km ukusuka kwi-Riesling Bike Trail eyaziwayo.
Nceda uqaphele ukuba iimpelaveki ezinde zifuna ubuncinci ubusuku obu-3 bokuhlala.
AYIKHO esizeni. Ndiyavuya kakhulu ukunika iingcebiso okanye uncedo xa lufuneka kwaye nditsalelwa umnxeba kuphela. Uhlala kwi-100 yeehektare zomhlaba wabucala kwaye i-cottage yindawo yokuhlala kuphela kwipropathi. Ukuzifihla okwenyani, uxolo kunye nokulunga.
AYIKHO esizeni. Ndiyavuya kakhulu ukunika iingcebiso okanye uncedo xa lufuneka kwaye nditsalelwa umnxeba kuphela. Uhlala kwi-100 yeehektare zomhlaba wabucala kwaye i-cottage yindaw…